ဘား (ဂီတ) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂီတသ‌င်္ကေတတွင် ဘား (အင်္ဂလိပ်: Bar) ဆိုသည်မှာ စည်းချက်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော ဘိ(တ်) (beat) များကိုစုစည်းထားသောနေရာဖြစ်သည်။ ဘားတစ်ခု၏ဘောင်ကို ‌‌ဒေါင်လိုက်မျဉ်းကလေးဖြစ်သော ဘားလိုင်း (Barline) ဖြင့်ပြသည်။ ဘားများရှိခြင်းကြောင့် သီချင်းတစ်ပုဒ်၏အပိုင်းများကို လွယ်လွယ်ကူကူရှာဖွေ‌နိုင်ပါသည်။
သီချင်းတစ်ပုဒ်တွင် ဘားများမြောက်များစွာပါရှိသည်။ ဘားတစ်ခုမှတ်ရာတွင် စည်းချက်သင်္ကေတ (Time Signature) ကိုကြည့်၍သတ်မှတ်သည်။ သာဓကအားဖြင့် စည်းချက်သင်္ကေတ "4/4" ဟုပြထားလျှင် ဘိ(တ်)လေးချက်‌ရောက်ပြီးတိုင်း ဘားလိုင်းတစ်ခုဆွဲသည်။ အချို့သီချင်းများတွင်မူ ပထမဆုံးဘားတွင် ဘိ(တ်)အပြည့်မပါရှိတတ်ပေ။ ဤကဲ့သို့သော ဘားမျိုးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် "anacrusis" သို့မဟုတ် "pick-up measure" ဟုခေါ်သည်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ဘားသည် ဒေါင်လိုက်ဆွဲသောမျဉ်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရသောကြောင့် ဘားဟုဆိုလိုက်သည်နှင့် ဘားလိုင်းကိုပါရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ ကွဲပြားစေရန်အကြောင်းကြောင့်သာ ဘားလိုင်းဟူသောအခေါ်အဝေါ်ကို သုံးလေ့ရှိသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဘားလိုင်းကို ဘားဟုသာခေါ်ဆိုပြီး ဘိ(တ်)များစုရာဘားကိုမူ "measure"ဟု ခေါ်ဆိုသည်။
ဘားလိုင်းအမျိုးအသားများ: ပုံမှန်၊ နှစ်ထပ်၊ ပြီးဆုံးခြင်း၊ ပြန်ကျော့ခြင်းအစ၊ ပြန်ကျော့ခြင်းအဆုံး၊ ပြန်ကျော့ခြင်းအစနှင့်အဆုံး
ဘားလိုင်းကိုပုံမှန်အားဖြင့် ဒေါင်လိုက်မျဉ်းတစ်ကြောင်းဖြင့်ဆွဲသည်။ မျဉ်းနှစ်ကြောင်းဖြင့်ဆွဲလျှင် နှစ်ထပ်ဘားလိုင်း (Double barline) ဖြစ်လာသည်။ နှစ်ထပ်ဘားလိုင်း ကိုသီချင်းတစ်ပုဒ်အတွင်း အပိုင်း (section) များခွဲခြားရာတွင်သုံးသည်။
မျဉ်းရှည်တစ်ကြောင်းနှင့် နောက်ထပ်မျဉ်းအထူတစ်ကြောင်းကို ဆွဲလိုက်လျှင် သီချင်းတစ်ပုဒ်၏ပြီးဆုံးခြင်းကိုပြသသောဘားလိုင်းဖြစ်သည့် ပြီးဆုံးခြင်းဘားလိုင်းကိုရသည်။
ယင်းပြီးဆုံးခြင်းဘားလိုင်းတွင် အထက်အောက်အစက်ကလေးနှစ်စက်ပါဝင်နေလျှင် ထိုဘားလိုင်းသည် ပြန်ကျော့ခြင်ဘားလိုင်း (Repeat barline) ဖြစ်သည်။ ပြန်ကျော့ခြင်းအဆုံးဘားလိုင်းကို တွေ့သည့်အခါ ပြန်ကျော့ခြင်းအစဘားလိုင်းမှ ပြန်လည်တီးခတ်ရမည်။ ထိုအစဘားလိုင်းမရှိလျှင် သီချင်း၏အစဖြစ်သော ပထမဆုံးဘားမှ ပြန်လည်တီးခတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
↑ ChordWizard Software. "www.howmusicworks.org". Archived from the original on9July 2012. Retrieved 11 September 2012.
↑ Nickol, Peter (2008). Learning to Read Music, ISBN 1-84528-278-7.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘား_(ဂီတ)&oldid=671565" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၄:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။